Sidee ayay jasiiraddii kaneecada badnayd Ee ay Malaysia cayrisay oo ka saartay Midowgoodii, ku noqotay dal kamida dunida koobaad? Yaase dhabaha guusha qaadsiiyay? Maxaanse ka baran karnaa?. – hareerley News
Singapore waa dal yar oo hal magaalo ah (city-state) kaasoo ah jasiirad yar oo dhacda koonfur-bari qaaradda Eeshiya. Waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya bed dhan 722km oo wareeg ah. Magaalada Darisalam ee Tanzania ayaa baaxad ahaa ka weyn.
Sanaddii 1963-dii ayay la midoobeen Malaysia iyaga oo noqday dal qura. Balse nasiib darro laba sano kadib, Malaysia baarlamankeeda ayaa u codeeyay in Singapore ka go’do Malaysia ayna ka baxdo. Iyaga oo sheegay inay tahay jasiirad yar oo kaneeco badan, dad soobalana kunool yihiin, taaso aan faaido ugu jirin Malaysia.